Muvhuro, September 6, 2010 Muvhuro, March 14, 2016 Douglas Karr
Hapana ari kumirira yako inotevera tweet, mamiriro ekuvandudza kana blog blog kuti vatenge yavo inotevera kutenga. Kune nguva dzose mukana wekuti iwe ungakurudzira mumwe munhu kutenga, asi hazvigoneke kufanotaura kana tarisiro yakagadzirira kutenga kwavo kunotevera kutenga. Ndosaka zvichikosha kuvepo kana ako tarisiro yakagadzirira kusarudza. Vachave vari kupi? Isu tinonzwisisa kubva pane yazvino maitiro epamhepo izvo ruzhinji rweinternet tarisiro richaita